Vanhu havachataura nezve mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Zvinoenderana ne data kubva kuI ISBN Agency, muna 2014, gore rekupedzisira kune marekodhi, mu Spain 90 zviuru zvinyorwa zvinyorwa zvakaburitswa pakati pevashambadzi nemapuratifomu ekuzvitsikisa, ayo akatengeswa Mamiriyoni makumi maviri emabhuku ekunyepedzera, 2 yavo ndeya 50 shades ye grey.
Nekudaro, a 38% yevagari veSpain vanoti havana kuverenga kana kusamboita, nepo yasara 62% chete 20% inoverengwa zuva nezuva, iyo yaigona kutaurwa kuti chete 9 yemamiriyoni 46.77 eSpanish vanoonekwa sevaverengi venguva dzose. Uye izvi zvinoshandurirei? Mukudaro kune hukuru hukuru asi chisiri pachena kujekerwa, izvo zvinoita kuti ndifunge izvozvo vanhu havachatauri zvemabhuku futi, ndiani haaverenge, anoona mabhuku sechinhu chinowanzoitika pane imwe nguva. Uye mubvunzo ndewokuti: Sei?
Hongu kavha yacho yakanaka
Mazuva mashoma apfuura, mumwe wandaizivana naye akandibvunza kana ndaiziva "ndeapi mabhuku aive akanaka" kuti ndipe imwe kunhengo yemhuri yenguva dzose yekuverenga mazuva ese. Kana zvandaida zvisina kumuita kuti awedzere, akaburitsa tagline: Nekuti havana kuburitsa imwe nyowani kubva kuGrey, handiti?
Mimwe mienzaniso inouya mupfungwa ndeyokutorwa kwemabhuku ekare anopfekwa nevamwe kumba nekuti "zvinotaridzika zvakanaka", kana munhu anotora bhuku nekuti butiro rinomudaidza uye nenguva yaunomuudza zvarinotaura nezvazvo ndatoisiya pane yako saiti. Hongu, zvinoita sekunge kune fungidziro huru yekuzvinyudza mumabhuku kupfuura chirevo chakanyorwa pamadziro eFacebook chakataurwa nemunyori kuti hapana anoziva.
Pandakanga ndiri mudiki, ndaive nemabhuku akawanda mumba mangu, ese maDisney kubva kuna Ediciones Gaviota nemadhirowa avo makuru, kana shefu yababa vangu (mumwe wevane mamirioni mapfumbamwe evaverengi) yandaisunungura nekufamba kwenguva. Nekudaro, nhasi uno ndiri kuona vana vasingatombosimudze tsiye dzavo kubva paconsole yavo, avo vanotsvaga vhidhiyo yemitambo yekudzidzisa paYouTube pazera remakore masere kana vasingabude kunotamba nevamwe vana nekuti ivo vanonyatso ziva nzira dzekirioniyoni yekuratidzira paterevhizheni. . Kutaura nezve zvinyorwa zvinoreva kuita chimwe chinhu icho chavanobatanidza chakanangana nechikoro uye iwo mabhuku akaisirwa ayo anopedzisira achisvetuka maganhuro maviri kana anopfuura kunyangwe vaine simba pamusoro paro pakupera kwesvondo.
Kwezvizvarwa zvitsva, zvinyorwa zvakafukidzwa nedzimwe nzira dzekutandarira zvimwe zviratidziro senge cinema, terevhizheni, mitambo yemavhidhiyo uye, kunyanya mumakore achangopfuura, iyo tekinoroji inonzi Internet iyo Google inotsvaga mwana ane makore mashanu ekuberekwa anoziva kuvhura pamberi pebhuku, nyaya kana chero imwe nzira yekubatanidza kumabhuku. .
Asi chinhu hachigumira ipapo. Mukukura, vanhu vazhinji vanoita kunge vasingaverenge kana kutaura nezve mabhuku futi. Unogara pasi kuti unwe doro uye mutaure nezvehure uye mengano, Game of Thrones kana kuungana kwekupedzisira kweSave me. kune imwe nguva, kune inoenderana nyika umo vanhu vashoma vanoungana mune cafe kuti ramble pazvinyorwa uye mabhuku akatswanywa nemhando nyowani dzevaraidzo.
Chakaipisisa pane zvese hachirevi chokwadi chekuti vanhu havachaverenge zvakanyanya kana kuti havazive bhuku ndereMamwe Makore Ekusurukirwa, Iyo Odyssey kana Ropa Muchato.. Dambudziko iri ndiyo nzira yatinoita nayo kuti vana vazhinji vanzwe kusagadzikana nemabhuku kubva pazera diki. Asi ini handisi baba kana mudzidzisi. . .
Ndeupi mufungo wako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Vanhu havachataure nezvemabhuku futi
Ini ndiri munyori, ndinoda mabhuku, murume wangu munyori wenhoroondo, anodawo mabhuku, muzukuru wangu muzivi uye muimbi, anoda mabhuku, amai vangu mudzidzisi wemasvomhu uye vanoda mabhuku ... shamwari maartist, vanoda mabhuku ... Ini ndinodzidzisa makirasi echiLatin American zvinyorwa uye zvemazuva ano zvinyorwa uye ndinoona kuti kune vechidiki vanoda mabhuku ... kune vadzidzi vandinofunga
Kune vadzidzi vanoda kutanga mashopu ekunyora, kuverenga mashopu uye vari kutsvaga mumwe munhu anovakurudzira nekuvabatanidza. Kune vadzidzisi vanofarira kuverenga. Kune vadzidzi vanofarira nhoroondo yenhoroondo uye vamwe nhoroondo yematsotsi. Kune vamwe vazhinji vanofarira nhetembo. Saka ndinofunga kune vazhinji vedu vanotaura nezvemabhuku, kuti tinonakidzwa nekugovana zvatinoverenga uye zvinotikurudzirawo kuverenga vamwe vanyori. Ndinotenda ne http://www.actualidadliteratura.com
Ndinobvumirana nekoment yako. Ndinofunga kuti vanhu nhasi vanoziva zvikuru tekinoroji; Asi kune rimwe divi, zvinofanirwa kunge zvakasiyana nguva uye hunyanzvi huri kuwana nzvimbo mumunda wekuverenga, asi izvo hazvitadzise vanhu kuverenga. Mabhuku akagadziridzwa kune tekinoroji, ini pachangu ndakaverenga kakawanda pamapuratifomu einternet (kunyangwe ndichifarira mabhuku pabepa kane chiuru). Iwo mafashoni: muzana ramakore rechiXNUMX kuve muverengi anofarira kwaive kiyi, uye nhasi kuve nePads nePhones. Nekudaro, idzi fashoni ndedzemhepo, isu tinodzokera kune "zvakapfuura."
Nezvose izvi ndinoreva kuti kwagara kuriko, kune uye kuchave nevaverengi, mune akawanda kana mashoma manhamba.
Semudzidzi wephanology philology uye anoda mabhuku, ini ndaizoda kuva nevanhu vazhinji vane tsika yekunyora, asi isu tave nezana ramakore umo maitiro akasiyana. Uri kuitei…
Zvakanaka, ndinofunga zvakafanana uye mhedziso ndeyekuti ndine urombo. Chete neiyi data kana mamiriro ezvinhu anogona kutsanangurwa zviri kuitika kwatiri kuSpain uye kune imwe nzvimbo yepasi.
Enyd Bliton, Salgari, Edgar RiceBurroughs nevamwe vazhinji, ndakavaverenga ndisati ndave nemakore 8 ekuberekwa. MuReyes, vaigara vachindipa mabhuku nemauto emarata.
Ini handisi kuzomira. Asi ini ndinotenga mabhuku, angangoita makumi matatu nematanhatu pagore, pamwe neaya andinowana kubva kuraibhurari. Parizvino, ini ndiri pazororo, ndakaverenga LA MUJER JUSTA, naSandor Márai uye mupurisa mukadzi asingafanire kundirova. Ini ndinojekesa kuti hazvina basa kana iri bhuku nyowani kana tafura yekuyera ... iwo makumi mashanu emvuri e grey HANDINA KUAVERENGA uye ini handidi kuitisa. Ndatenda.
Tose ndinobvumirana, ini ndinofunga kuti kune vashoma uye vashoma vedu isu vanoverenga nesimba. Pandaive nemakore gumi, ndakaverenga zvese zvakawira mumawoko angu (uye paive nemabhuku madiki evana panguva iyoyo) asi mwanakomana wangu anoverenga zvishoma. Patinoenda kuzvitoro zvemabhuku anoda kutarisa mabhuku uye anogara achindibvunza mamwe asi pakupedzisira anoatarisa kumba uye haaverenge; Ane masherufu maviri akazara nemabhuku andingadai ndisina kumborota pazera rake, asi haatomboverenga. Paanenge ari pamba (nerombo rakanaka anoshandisa nguva yakawanda achitamba mumugwagwa neshamwari dzake) anofarira kuona TV kana mahubhu uye magemhu pahwendefa. Uye chokwadi ndechekuti, ini handizive zvekuita kumuita kuti ade kuverenga.
Yoz nks akadaro
Mhoroi, zvinofadza kuziva kuti urikuyedza kudzidzisa kuverenga mumwana wako, ndinoda kukupa pfungwa yako nezvazvo.
Ini ndinofunga kuti dambudziko rekuti vana parizvino vasinga verenge ingave nzira iyo ivo "vanokurudzirwa" kuita kudaro, pamwe nzira iyo iyo zita kana munyori inokurudzirwa haina kukwezva zvakakwana.
Ndinoziva kuti kune vechidiki vakati wandei vava kubatikana nehunyanzvi, zvisinei handigone kuti zvakaipa zvachose, ndinofarira mitambo yemavhidhiyo ini ndine makore makumi maviri nemaviri asi handina hanya nazvo; kunyangwe zvakadaro ini ndinogona kukuudza semuenzaniso Dhiyabhorosi Mhere Yangu vatambi vacho vanovakirwa pane iwo ebasa re "Iyo Divine Comedy" (22) - Dante Alighieri, imwe Halo ine nhoroondo yakakura kwazvo iyo kune mabhuku uye ma comic. ziva kuti kunyangwe sainzi ngano inowanzo kupindwa muropa zvisingaite.
Assassin's Creed iyo yakavakirwa pane chaiko nhoroondo dzechokwadi mmm ha, ndiyo nzira tekinoroji yakakurudzira vamwe vedu kuongorora nekudzidza kubva kare kuti isu tanga tisingazive zvachose kana zvishoma, kuti mwana aswedere padyo nemabhuku chaiwo. Chero bedzi iwe, futi, kuongorora nyika yemwana wako uye nekutsvagisa misoro yavo yavanofarira, unogona kumutsigira mukumupa chimwe chinhu chekuverenga.
Ndadzidza zvinhu zvakawanda nezvenyaya iyi ndatenda kunyangwe kuna munin'ina wangu anga aine xbox kubvira aine makore manomwe kana masere ekuberekwa uye ndakanzwisisa kuti kunyangwe komiki kana manga anogona kubatsira mune idzi kesi; Ndiri kureva chokwadi chekuvaswededza padhuze nehunyanzvi hwechitanhatu hwevanhu (zvinyorwa), uye kuti zvinokwezva sei kuda kwavo kuenda kumabhuku akakomba (sekutaura) kubva kwavanowana mazano akanaka emitambo yemavhidhiyo, mafirimu, anime, nezvimwe.
Sei usingaedze kutanga nechimwe chinhu chakadai? Mubvunzo wekusanganisa zvido zvemunhu mune chimwe chinhu chaunofunga kupinza kuitira kuti chichiyemurika chinogona kushanda, uye kwete izvozvo chete, asi zvakare kuti zvinozova tsika. kugadzira zvisungo, gamuchira misiyano.uye kwete kumanikidza chero chinhu, zvakare kugadziriswa kwevakuru kuenda paudiki nhasi.
Zero kusarudzira maitiro avo pane kutora mukana wavo; pakupera kwezuva tinodzidza chidzidzo chakanaka, tichitotamba mumugwagwa neshamwari.
Ndokusaka nguva pfupi yadarika kana vana vaona bhuku ravanoona "homework" pamapeji uye rinova rinofinha, rakarongeka. Ini ndinofunga zvinotanga nekuvabvunza zvavanoda, kusvika pakuvaziva zvakanyanya uye nezvazvo kuongorora izvo zvinogona kuvatungamira kune ino tsika yakanaka, chokwadi hachisi chekuti ivo vanokuudza - verenga izvi! - asi kuti vanotora bhuku pavanoda , vasvike pakuvaziva, vazvivaraidze uye vadzidze pazviri. Saka nekukurumidza, pamusoro pekuverenga, ndinotenda kuti mwana wako acharatidza kuremekedza uye kushivirira kwenyaya dzakasiyana, mabasa, vanyori ...
Kwazisai uye netarisiro yekusagumbura, ndoda kutambudzika nepfungwa iyi 🙂
Pindura Yoz Nks
Susana gonzalez akadaro
Ndatenda zvikuru nezano! Ndichaedza kuona kana zvichishanda.
Pindura Susana González